TETRIS 3.0.10 Android အတြက္ Aptoide APK အား ေဒါင္းလုပ္ ျပဳလုပ္ပါ
ဗားရွင္း 3.0.10 လြန္ခဲ့ေသာ 1 ႏွစ္က
ဂိမ္းမ်ား ပေဟဠိ TETRIS
TETRIS ၏ ေဖာ္ျပခ်က္
download လုပ်အခမဲ့ - အားလုံးအချိန်များ၏ရောင်းအားအကောင်းဆုံးမိုဘိုင်းဂိမ်းတစ်ခုပေါ်တွင်ထွက်လက်လွတ်မနေပါနဲ့! All-features အသစ်နှင့်ကစားရန်နည်းလမ်းများနှင့်တကွ, ကမ္ဘာကျော်Tetris®သင်သိဂိမ်းနှင့်ချစ်ခြင်းပြန်လည်ရှာဖွေရန်အတွက်။ ရှင်းရှင်းလင်းလင်းသင့်ရဲ့လိုင်းတို့ကိုစောင့်ရှောက်မှုအရာကိုတက်ကောက်ဖို့လွယ်ကူသောဤပဟေဠိဂိမ်းထဲမှာအပူအဖြစ်ကိုသင့်အေးမြစောင့်, ဒါပေမဲ့မာစတာရန်ခက်ခဲ။ ဒီ reimagined Tetris®ဖြစ်ပါတယ်။
မာရသွန် mode မှာအကွာအဝေး GO
စုံလင်သောမဟာဗျူဟာ Create နှင့်အဆုံးမဲ့ Tetrimino လှုပ်ရှားမှုနှင့်အတူရှင်းရှင်းလင်းလင်းသင့်ရဲ့လိုင်းတွေကိုစောင့်ရှောက်။ ဒီအစဉ်အလာTetris® mode မှာမူရင်းပွတ်ဆွဲခြင်းနှင့် One-Touch ကိုထိန်းချုပ်မှုအကြားကိုရွေးချယ်ပါ။
ဤ multi-level ကိုပဟေဠိ mode မှာတတ်နိုင်သမျှအနည်းငယ် Tetriminos အဖြစ်သုံးပြီးနဂါးငွေ့တန်းရဲ့ core ဘို့တူး။ Power-ups နှင့်အံ့သြဖွယ်ဆုလာဘ်သို့ Tetrimino ပိတ်ဆို့အသွင်ပြောင်းဘို့ချိန်းဒင်္ဂါးပြား။
THE TOP ယှဉ်ပြိုင်
သစ် Explorer Mode တွင်သင့်ကျွမ်းကျင်မှုချွတ်ပြပါ။ သင်ယှဉ်ပြိုင်မှုနှင့်အတူဦးခေါင်းသည်-to-ဦးခေါင်းကိုသွားသည့်အခါကိုယ့်ကိုယ်ကိုနဲ့အခြားကစားသမားကိုစိန်ခေါ်မယ်။
သငျသညျရှင်းလင်းပါတယ်တိုင်းလိုင်းတစ်တာလီချိုး Keep, ဒါမှမဟုတ်Tetris® Rank အတွက်မိတ်ဆွေများနှင့်အတူယှဉ်ပြိုင်ရန်က Facebook သို့လင့်ထားသည်။ သင်ပင်သင့်ရဲ့ Newsfeed ကိုအပေါ်သူတို့အားမိုဃ်းကောင်းကင်အမြင့်ရမှတ်များနှင့် ပတ်သက်. ဝါကွှားနိုငျသညျ!
EA ရဲ့ Privacy & Cookie ပေါ်လစီ (privacy.ea.com) နှင့်အသုံးပြုသူသဘောတူညီချက် (terms.ea.com ၏လက်ခံမှုလိုအပ်သည်။ အကူအညီများသို့မဟုတ်မေးမြန်းစုံစမ်းလိုသည်များအဘို့အ http://help.ea.com/ သွားရောက်။
ဒီ app (အသေးစိတ်ကိုသီးသန့်လုံခြုံရေး & Cookie ပေါ်လစီကြည့်ပါ) တတိယပါတီ analytics နည်းပညာကိုတဆင့် data တွေကိုစုဆောင်း။
ဒီ app က 13 ကျော်တစ်ဦးပရိသတ်အတွက်ရည်ရွယ်လူမှုရေးကွန်ရက်မှတိုက်ရိုက်လင့်ခ်များပါရှိသည်။
ဒီ app အင်တာနက်ကိုတိုက်ရိုက်လင့်ခ်များပါရှိသည်။
ဂျာမဏီထက်အခြားနိုင်ငံအားလုံးအဘို့: EA ၏ www.ea.com/1/service-updates အပေါ် posted 30 ရက် '' အသိပေးစာပြီးနောက်အွန်လိုင်း features နဲ့ဝန်ဆောင်မှုများကိုအနားယူစေခြင်းငှါ။
ဂျာမဏီများအတွက်: (ရရှိနိုင်ပါလျှင်) ကို EA က e-mail ကိုတစ်ဦးလျှင် 30-နေ့ကအသိပေးစာပြီးနောက်အွန်လိုင်း features နဲ့ဝန်ဆောင်မှုများကိုအနားယူနိုင်ပြီး www.ea.com/de/1/service-updates အပေါ်တင်ခဲ့သည်။
TETRIS အတြက္ အသံုးျပဳသူ အဆင့္သတ္မွတ္ခ်က္မ်ား
TETRIS အေပၚ ျပန္လည္စစ္ေဆးမႈမ်ား
TETRIS အေပၚတြင္ ျပန္လည္ စစ္ေဆးမႈ မရွိပါ။ ပထမဆံုး ျပဳလုပ္လိုက္ပါ!
lamune စတိုး 49.02k 14.13M
TETRIS ႏွင့္ အလားတူေသာ အက္ပ္မ်ားကို ေဒါင္းလုဒ္ဆြဲပါ
APK အေၾကာင္း TETRIS အခ်က္အလက္
APK ဗားရွင္း 3.0.10
ထုတ်လုပ်သူ Sas Games
App Name: TETRIS
Release date: 2018-06-14 09:03:18
TETRIS APK ကိုေဒါင္းလုဒ္ဆြဲပါ